Gallery | University of Maubin | Page 2
The fresher’s welcome ceremony of Maubin University was held at the Main Hall on 12th December, 2019. Rector SayaGyi Dr. AungKyaw delivered an opening remarks and Pro-rector Dr. LwinLwinMyint explained about students affairs to the freshers. On behalf of all the Arts Departments, Dr. Soe Win, Professor (Head), Department of Geography welcomed the students and […]
Signing Ceremony of Mou Between College of Agriculture, Guangxi University, China and Department of Botany, Maubin University, Myanmar
An MoU was signed for the co-operation of scientific research projects in the field of agriculture both in China and Myanmar between College of Agriculture, Guangxi University, China and Department of Botany, Maubin University, Myanmar in the conference hall of Maubin University on …. November, 2019. Rector SayaGyi Dr. AungKyaw delivered an opening speech and […]
၂၀၁၈-၂၀၁၉ ပညာသင်နှစ် မဂ္ဂဇင်းကလောင်ရှင်ဂုဏ်ပြုပွဲအခမ်းအနား
မအူပင်တက္ကသိုလ်၂၀၁၈-၂၀၁၉ ပညာသင်နှစ် မဂ္ဂဇင်းကလောင်ရှင်ဂုဏ်ပြုပွဲအခမ်းအနားကို (၂၄-၁၀-၂၀၁၉)ရက်နေ့တွင် ပင်မဆောင်ခန်းမတွင် ကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့ရာ ဒုတိယပါမောက္ခချုပ် ဆရာမကြီး ဒေါက်တာလွင်လွင်မြင့်က အဖွင့်အမှာစကားပြောကြားပြီး မဂ္ဂဇင်းကော်မတီဥက္ကဌ ပါမောက္ခ(ဌာနမှူး) ဒေါက်တာဥမ္မာမြင့်က ကလောင်ရှင်ဂုဏ်ပြုပွဲ ကျင်းပခြင်းနှင့် ပတ်သက်သည်များကို ရှင်းလင်းပြောကြားပြီး ကလောင်ရှင်များအား ဂုဏ်ပြုမှတ်တမ်းလွှာများ ပေးအပ်ချီးမြှင့်ခဲ့ပါသည်။ ထို့နောက် ငွေသဇင် ပုံနှိပ်တိုက်မှ ဒေါ်ခင်ငွေရီက မအူပင်တက္ကသိုလ် ဓမ္မာရုံတည်ဆောက်ရေးအတွက် အလှူငွေ ငါးသိန်းကျပ်တိတိကို ပေးအပ်လှူဒါန်းခဲ့ပါသည်။
Opening Ceremony of (Institute for International Education) USA Online: A training Course for International Relation Office
The opening ceremony of(Institute for International Education) USA Online Course which isarelated training course for International Relation Office was held in the conference room of Maubin University on 19th October, 2019. The opening speech was delivered by Rector Dr. Aung Kyaw.